W/Macdanta oo shirkadaha Biyo soo saarka ka dalbatay inay ogolaansho ka haystaan wasaaradda | FooreNews
Home wararka W/Macdanta oo shirkadaha Biyo soo saarka ka dalbatay inay ogolaansho ka haystaan wasaaradda
W/Macdanta oo shirkadaha Biyo soo saarka ka dalbatay inay ogolaansho ka haystaan wasaaradda
fooreFeb 29, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)-Wasiirka Macdanta oo shirkadaha Hargeysa(Somaliland.Org)-)-Wasiirka Wasaarada Macdanta Tamarta iyo Biyaha Somaliland Eng Xuseen Cabdi Ducaale, ayaa soo saaray Wareegto lagaga dalbanayo dhammaanba shirkadaha ka shaqeeya qodista biyaha ku jira dhulka hoostiisa inay ogolaansho ka heystaan wasaaradda macdanta iyo biyaha.
Sidaasi waxa wasiirku ku sheegay wareegto uu maanta soo saaray oo u dhignayd sidan:-
”Anigoo tixgelinaya in ay biyuhu nolosha noolaha oo dhan u yihiin udub dhexaad, sidoo kalena tixgelinaya inay waajib dawli ah tahay in qof kasta oo degan dhulweynahaJSL uu xaq u leeyahay inuu helo biyo nadiif ah oo dabooli kara baahidiisa daruuriga ah. Isla markaana ka hortagaya wasakheynta biyaha dhulka hoostiisa ku jira (taas oo aan si naba suurtogal u ahayn in dib loo nadiifiyo), waxa kale oo ay wareegtadani meesha ka saaraysaa khilaafka ka dhex qarxa shirkadaha ceelasha biyaha qoda oo badiba ku hungooba inay wax natiijo ah ka gaadhaan shaqadooda iyo dadka rayidka ah oo aan marnaba ku qancin jawaabaha aan cilmiyeysnayn ee ay bixiyaan masuuliyiinta shirkadahaasi.
Sidaa awgeed waxaan soo saaray wareegtadan qeexaysa qodobada hoos ku qoran:
Dhamaanba shirkadaha qoda biyaha dhulka hoostiisa ku jira waa in ay ogolaansho (drilling Permit) ka haystaan WMT& Khayraadka Biyaha.
Shirkaduhu waxay qodista ceel bilaabi karaan ka dib markay ogolaansho buuxa ka hesho xafiiska agaasinka biyaha ee WMT& Biyaha, iyadoo injineerada waaxda biyuhu ay ku khasban yihiin inay riiga ku dul qotomiyaan meel ay macluumaad buuxa ka hayaan. Tani waxay muhiim u tahay in hantida shacabka loo adeegsado sida ugu haboon.
Dhamaan shaqaalaha ka shaqeeya riigagga qoda ceelasha biyaha wa in ay ka diiwaan gashanaadaan xafiiska agaasinka biyaha ee Wasaaradda.
Waxa lagu wargelinayaa cid kasta oo ka hor timaada qodobadan kor ku xusan inay la kulmi doonaan ciqaab waafaqsan sharciga Somaliland.
Waxa lagu war galinayaa dhamaan hayadaha ka shaqeeya hawlaha biyaha in ay iska diiwaan geliyaan waaxda biyaha ee WMT& Biyaha.
Haddaba waxaan ka codsanayaa dhamaan masuuliyiinta ay wareegtadani tooska ugu socoto iyo masuuliyiinta ogaysiinta ku lehba inay sidaa ula socdaan isla markaana gacan ku siiyaan Isuduwayaasha WMT& Biyaha si ay u gutaan waajibaad kooda. Isla markaana waxaan farayaa agaasinka waaxda biyaha in uu si dhaqso ah u diyaariyo dhamaan dhukumentiyada iyo ruqsadaha looga baahan yahay wareegtadan. Sidoo kale waxa Agaasimaha guud ee WMT& Biyaha la farayaa in uu hirgaliyo fulinta wareegtadan.”
Previous PostHawlgalkii ugu weynaa oo Dawladda Hoose ee Hargeysa Ka Fulisay Suuq-weynaha Waaheen, Jidka wadnaha Magaalada iyo Khasaaraha ka dhashay Next PostShir lagaga hadlayay horumarinta Ganacsiga gaarka ah oo lagu qabtay Hargeysa